Amatekisi aseGoli azokhuphula imali | Scrolla Izindaba
Abaphathi bamatekisi e-Alexandra bathi ukukhuphuka okukhulu kwemali yokugibela kuyadingeka ngenxa yemithetho ebekwe nguhulumeni ekala isibalo sabagibeli ukuthi bangagcwali etekisini ukuze bengathelelani ngegciwane le-corona. Osomatekisi babala kanye nezindleko eziphakeme zikaphethiloli nokunye.
E-Alexandra, imali yokugibela entsha izoba ngama-R30 kusukela mhla zi-15 kuNhlangulana. Njengamanje abagibeli bakhokha phakathi kwe-R13 ne-R16 ukuya ezindaweni eziseduze njenge-Sandton ne-Bryanston. Manje sekuzomele bakhokhe ama-R30.
Usihlalo we-Alexandra Taxi Association uVusi Mayaba, uthi bekunzima ukuqhuba ibhizinisi kulo mvalelo njengoba kunesikhathi esibekiwe nguhulumeni sokusebenza kanye nesibalo sabagibeli. “Iningi labashayela amatekisi lithwele kanzima,” usho njalo.